ग्लोबल आईएमई बैंकमा तपाईँको खाता छ ? होसियार ! खाताको पैंसा गायव हुनसक्छ — Motivatenews.Com
काठमाडौं – के तपाईँको ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता छ ? यदि छ भने सचेत हुनपर्ने अवस्था आएको छ । बैंकमा जम्मा गरेको रकम ग्राहकको खाताबाट हराउने गरेको पाइएपछि सचेत हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।
केही दिन अघिदेखि बैंकमा राखिएको रकम आफ्नो खाताबाट गायव हुन थालेपछि ग्राहकले असुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन । दुःखले कमाएर सानो सानो रकम जम्मा गरेका ग्राहकले पैसा हराउन थालेपछि ग्लोबल आईएमई बैंक प्रतिको विश्वास घटेको बताएका छन ।
कसरी हरायो रकम ?
ग्लोबल आईएमई बैंकका एक जना ग्राहकले खाताबाट पैसा गायव भएको भन्दै सावधानी अपनाउन समाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन । उनले मोवाइल बैंकिङबाट पैसा ट्रान्स्फर भएको भन्दै सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘बैकमा भएको खाताबाट हिजो बेलुका ७ बजे बिना जानकारी कसैले सबै रकम मोबाइल बैंकिङबाट मार्फत निकालेको छ वा मोबाइल बैंकिङ ह्याक गरिएको छ । त्यसैले सबैलाई साबधान हुन जानकारी गर्दछु ।’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन, ‘यस विषयमा बैंकलाई जानकारी गराईसकिएको छ तर बैंकले छानविनको लागि छिटो गर्ने कुनै तत्परता देखाएको छैन । पुलिस रिपोट गर्ने प्रत्रियामा छु ।’
एकदमै गोप्य र सुरक्षित मानिएको मोवाइल बैंकिङबाट रकम ट्रान्स्फर हुनु रहस्यमय कुरा छ । दुई वा भन्दा बढिको खाताबाट पैसा गायव हुनु ह्याकरले आक्रमण गरेको भनेर बुझ्नपर्ने नेपाल बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको भनाई छ । ‘एक जनाको मात्र पैसा ट्रान्फर भएको हो भने त्यो उसको परिवारको सदस्यले मोवाइल चोरेर ट्रान्स्फर गरेको हुनसक्छ वा मोवाइल बैंकिङको पासवर्ड थाहा पाएका साथिभाइहरुले पनि ट्रान्स्फर गरेको हुनसक्छ’ मोटिभेट न्यूजसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यदि दुई वा दुई भन्दा बढिको खाताबाट रकम गायव भएको छ भने त्यो ह्याकरले आक्रमण गरेको हुनसक्छ ।’
‘यदि यसरी ट्रान्स्फर भएको भए कुन खातामा पैसा जम्मा भएको छ उसलाई समाउँदा सबै थाहा भइहाल्छ’, उनले अगाडि भने, ‘ह्याक गरेकै भएपनि पुलिस रिपार्ट गर्दा हुन्छ ।’
यता बैंकले यसरी रकम गायव भएको जानकारी पाएको जनाएको छ । यस विषयमा थप बुझ्ने प्रयास भइरहेको बैंकका प्रमखु सूचना अधिकारी सुरेन्द्र रेग्मीले बताए । ‘हामीले सामाजिक संजालबाट यस विषयको जानकारी पाएका छौं’ मोटिभेटसँग कुरा गर्दै रेग्मीले भने, ‘के भएको हो भनेर डिजिटल बैंकिङ विभागमा बुझ्ने काम भइरहेको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको चुनाव नजिकिदै गर्दा खातामा राखेको रकम हराएपछि आफ्नो पैसा कतै चुनावमा खर्च त भइरहेको छैन भनेर ग्राहकले शंका गर्न थालिएका छन । चुनावमा ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्र ढकाल बरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा छन् । उनले आफ्ना मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोप लागिरहेका बेलामा जनताको खातामा जम्मा गरेको रकम हराउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।